INDUSTRIAL RELATION – CTUM
Published by ctum at December 18, 2019
အလုပ်အကိုင်အာမခံချက်ရှိရေးနှင့်အလုပ်ရှင်-အလုပ်သမားကြားအပြုသဘောဆောင်သော ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ
အလုပ်အကိုင်အာမခံချက်ရှိရေးနှင့်အလုပ်ရှင်-အလုပ်သမားကြားအပြုသဘောဆောင်သော ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇-၁၈)ရက်၊ ကနောင်ခန်းမ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့) ဆွေးနွေးပွဲ၏ အဖွင့်အမှာစကားကို မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် CTUM ဥက္ကဌဦးမောင်မောင်၊ ဂျပန်သံရုံးတာဝန်ခံ Mr. Yuta Isozaki ( First Secretary Embassy of Japan) ၊ […]
Published by ctum at November 14, 2019
IWFM invited the Danish review mission members to the IWFM small office
IWFM invited the Danish review mission members to the IWFM small office in Htan TaBin township. IWFM is very proud to receive the international guest to […]
Published by ctum at October 22, 2019
၁၄ ကြိမ်​​မြောက်​ အမျိုးသားအဆင့်​ သုံးပွင့်​ဆိုင်​ ​တွေ့ဆုံ​ဆွေး​နွေးမှု ဖိုရမ်​
၁၄ ကြိမ်​​မြောက်​ အမျိုးသားအဆင့်​ သုံးပွင့်​ဆိုင်​ ​တွေ့ဆုံ​ဆွေး​နွေးမှု ဖိုရမ်​ ၂၀၁၉ ခုနှစ်​ ၊ ​အောက်​တိုဘာလ ၂၁ ရက်​​နေ့မှ ၂၂ ရက်​​နေ့အထိ ထို NTDF ဆွေးနွေးပွဲအား CTUM မှ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ တတ်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရများမှာ- ၁။ သင့်​​လျော်​​ကောင်းမွန်​​သော အလုပ်​အကိုင်​ […]
Published by ctum at October 21, 2019
IndustirALL Asia Pacific Youth Exchange Forum
Two representatives from IWFM participated in the IndustirALL Asia Pacific Youth Exchange Forum in Malaysia on 21-22 Oct, 2019. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သတ္တု၊ ဓာတု၊ ကုန်ထုတ်နှင့် အထွေထွေအလုပ်သမားများအပါအ၀င် ကဏ္ဍ (၁၄) […]